Iindaba - Zeziphi iindidi ezisibhozo zomngundo wenaliti?
(1) Inxalenye-enye yokubumba ngenaliti
Xa kuvulwa ukungunda, ukungunda okushenxiswayo kunye nokungunda okusisigxina kuyahlulwa, ukuze indawo yeplastikhi ikhutshwe, ebizwa ngokuba ngumngundo omnye womphezulu wokwahlula kwaye ikwabizwa ngokuba ngumngundo ophindwe kabini. Yeyona ndlela ilula kunye nesisiseko sokubumba ngenaliti. Inokuyilwa njengombumba wenaliti enye okanye umngundo wenaliti eyahlukeneyo njengoko kufuneka. Yeyona sokubumba inaliti esetyenziswa kakhulu.
(2) kabini ulwahlulo komhlaba ngenaliti ukungunda
Ukubumba ngenaliti komhlaba umphezulu inendawo ezimbini zokuzahlula. Xa kuthelekiswa nokuvunda komhlaba ngenaliti enye yokubumba, ukungunda okuphindwe kabini kwendawo yenaliti yongeza ipleyiti ephakathi (ekwabizwa ngokuba yipleyiti yesango ehambisekayo) kwinxalenye yokubumba esisigxina. Kuxhotyiswe ngamasango, iimbaleki kunye nezinye izinto ezifunekayo ekubunjweni okungaguqukiyo), ke oko kukwabizwa ngokuba luhlobo lweplate ezintathu (ipleyiti ehambayo, ipleyiti ephakathi, ipleyiti esisigxina) inaliti yokubumba, esetyenziselwa isango lohlobo olunye ukondla. Cavity okanye multi-kwisisu sokubumba ngenaliti. Xa kuvulwa ukungunda, isitya esiphakathi sahlulwe kwitemplate esisigxina kumgama osisigxina kwiposti yesikhombisi sokubumba esisusiweyo ukuze kususwe i-condensate yenkqubo yokugalela phakathi kweetemplate ezimbini. Ukwahlukana kabini komhlaba ngenaliti yokubumba kunesakhiwo esintsonkothileyo, iindleko eziphezulu zokuvelisa, kunye nokusebenza okunzima kwamalungu. Ngokuqhelekileyo ayisetyenziselwa ukubumba iimveliso ezinkulu okanye ezongezelelweyo ezinkulu zeplastiki.
(3) Inaliti yokubumba kunye lateral umgca yokwahlula kunye engundoqo indlela yokutsala
Xa icandelo leplastiki linemingxunya esecaleni okanye iindlela zangaphantsi, kufuneka usebenzise isiseko okanye isilayida esinokuhamba ecaleni. Emva kwenaliti yokubumba, ukungunda okuhambisekayo kuqala kufuduswa kumgama othile, emva koko icandelo elityibilikisiweyo lepini egobileyo eligxunyekwe kwitemplate esisinyanzelo inyanzela isilayida ukuba siphumele ngaphandle, kwaye kwangaxeshanye, umtyhaleli wendlela yokudiliza utyhala ipleyiti yokumisa ukubumba icandelo leplastiki. Susa undoqo.
(4) Inaliti yokubumba kunye nezahlulo ezinokuhanjiswa
Ngenxa yolwakhiwo olukhethekileyo lwamalungu eplastikhi, ukubumba kwenaliti kufuneka kubonelelwe ngezinto zokubumba ezinokushenxiseka, ezinje ngomngundo oshukumayo, izinto zokubumba zekhonkco ezihambisekayo, ukufakwa okuhambisekayo, ii-cores ezinemisonto okanye imisesane, njl. ukusuka kwinxalenye yeplastiki.
(5) Zenzekelayo umtya ukothula inaliti yokubumba
Kwizinto zeplastikhi ezinemisonto, xa kufuneka ukuzidiliza okuzenzekelayo, isiseko esijikeleziweyo esinemisonto okanye isangqa singasetwa kwisikhunta, kusetyenziswa isenzo sokuvula sokubumba okanye indlela ejikelezayo yomatshini wokubumba inaliti, okanye isixhobo esikhethekileyo sokuhambisa imisonto Isangqa okanye isangqa esidityanisiweyo sijikeleza ukukhupha icandelo leplastiki.
(6) komngundo ziphene runnerless
Inaliti ukungunda runnerless ibhekisa kwindlela zokufudumeza adiabatic yembaleki ukugcina iplastikhi phakathi umlomo kunye nesisu umatshini ziphene sukube kwimeko onyibilikileyo, ukuze kungabikho condensate kwinkqubo ukugalela xa inxalenye yeplastiki ithathwa xa kuvulwa ukungunda. Eyokuqala ibizwa ngokuba ngumdibanisi wenaliti ye-adiabatic, kwaye eyokugqibela ibizwa ngokuba ngumatshini oshushu wenaliti.
(7) Ekunene-engile isitofu ngenaliti
Ekunene-engile ngenaliti ngumngundo zilungele kuphela oomatshini inaliti yokubumba. Ngokungafaniyo nezinye izinto zokubumba inaliti, ulwalathiso lokondla lolu hlobo lwesikhunta ngexesha lokubumba lujolise ngqo ekuvuleni nasekuvalweni kwesalathiso. Indlela yakhe ephambili yokuhamba isetelwe kumacala omabini okuhamba kunye nokuqina komngundo okwahluliweyo, kwaye indawo enqamlezileyo ihlala ihlala ihleli. Oku kwahlukile kwezinye izinto zokubumba. Ukuphela kwendlela yokuhamba ephambili kukuthintela umatshini wenaliti yokubumba. Umbhobho kunye nokuphela kokungena kwejelo eliphambili kunxitywe kwaye kukhubazekile, kwaye kunokufakwa indawo yokufaka umjelo wokuhamba onokubuyiselwa.
(8) Inaliti ngumngundo indlela yokukhululwa komngundo kumbumba omiselweyo (Cavity)
Kwizinto ezininzi zokubumba inaliti, isixhobo sokukhupha sifakwe kwicala lesikhunta esinokususwa, esilungele umsebenzi wesixhobo sokukhupha kwinkqubo yokuvula nokuvala inkqubo yomatshini wokubumba. Kwimveliso eyiyo, kuba ezinye iinxalenye zeplastiki zinqunyelwe yimilo, kungcono ukushiya icandelo leplastiki kwicala lesikhunta esisigxina. Oku kwenza ukuba indawo yeplastiki iphume ekubumbeni, ke kufuneka ibekwe ecaleni kwesikhunta esisigxina. Isixhobo.
Okulandelayo: Yintoni iSiseko seMold?
Egqithileyo Plastic Inaliti Ukubumbela Shrinkage